Dowladda Soomaaliya oo Sagootisay UNPOS iyo Ambassador Mahiga:-WARSAXAAFADEED+“SAWIRRO” | Radio Muqdisho
Dowladda Soomaaliya oo Sagootisay UNPOS iyo Ambassador Mahiga:-WARSAXAAFADEED+“SAWIRRO”
Published on June 10, 2013 by Cilmi Waare · 3 Comments · 3,625 views
Shir jaraa’id oo ay wada qabteen ayuu madaxweynahu yiri “Maanta Saaxiib ayaan sagootineynaa. Saaxiib nala joogey waqtiyo adag iyo kuwo kaleba. Saaxiib aan ka daalin caawinaada Soomaaliya oo suurtogeliyey in Soomaaliya ay afar sano isbedel muuqda ka sameysey amniga iyo siyaaasadda.
“Mahiga waa saaxiibkeyga iyo sidoo kale saaxiibka Soomaali oo dhan. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan is naqaano, oo marka buugaagta taariikhda la qoro in doorka Dr Mahiga iyo kaalmadiisa Soomaaliya aad loogu riyaaqi doono oo loo sacab tumi doono.
“Dr Mahiga waxuu ahaa qoraagii Roadmap-ka. Inkastoo ay jireen shakiyo in si nabad ah lagu dhameystirayo Roadmap-ka, haddana waxuu ahaa Roadmap-kan oo isu keenay Soomaali oo dhan, oo u horseeday dib u heshiisiin keentay in la helo dowlad rasmi ah.
“Khibradiisa, waayo aragnimadiisa, degennashihiisa, dulqaadkiisa iyo dabeecadiisa wanaagsan iyo xushmaddiisa aad baa loo tabi doonaa.
“Waxuu aaminsanaa Soomaaliya goor ay dad badan diidanaayeen. Waxuu shir guddoomiyey shirar badan isagoo ogaa in shirarkaas oo isu tagay inay muhiim u ahaayeen mustaqbalka. Diiradiisu waxey marwalba u saarneyd shacabka Soomaaliyeed, waxuuna ku guuleystay in si nabad ah dowlad rasmi ah loo helo oo dad badan ay aaminsanaayeen inaysan dhaceynin.
“Waxuu Soomaaliya gaarsiiyey waddadii soo kabashada, waxaana u ballanqaadeynaa inaan sii wadeyno shaqadii uu bilaabay inagoo siduu aaminsaa rumeysan. Magaca dalkan wanaagsan ayaa ugu mahadcelinayaa Dr Mahiga.
Photoby:-Maxamed Ibraahim Raage (Honest)
maxamed amiin hilowle says:	June 10, 2013 at 8:32 pm	mahiga.mahaa.qof somalida ilobi karto.waxow so shaqeyaay xili ad iyo ad u adak.?waxan lenahay.mahadsanid mudane mr mahigaa?……waxan ku rajey neynaa sinabad ah inaat dalkage ugu labatiit…..by
Reply »	ruqiyo says:	June 11, 2013 at 2:05 am	mudane mahiga noo soo noqo adigaan ku baranee insha allah
Reply »	mahiga says:	June 12, 2013 at 4:29 pm	mahiiga mahadsanid 100000000000000%